Otu esi edozi njehie dpkg: ịdọ aka na ntị: `` ldconfig '' na Debian Testing | Site na Linux
Otu esi edozi njehie dpkg: ịdọ aka na ntị: `` ldconfig '' na Debian Testing
Taa ekpebiri m ịlaghachi Nyocha Debian. Ka nsogbu dị na Kernel o doro anya na, nke ọma, ahapụwo m nke na-eweta Afanyekwa arụnyere na emelitere nchịkọta ndị ọzọ.
M na-emelite Synaptic mgbe m ghọtara na ọ were ogologo oge wee rapara mgbe m nwara ịnweta ya. Egburu m usoro ahụ site na njikwa wee gbaa ọsọ:
Iji mechaa ịhazigharị ngwugwu ndị na-efu, mana: Ihe ijuanya Enwetara m njehie nke gwara m:
Gini ka anyi ga - eme? Na Linuxmint-Hispanic nye anyi osisa.
Anyị na-emeghe a ọnụ dị ka mgbọrọgwụ ma tinye:
Iji mee ka ọ dị na usoro anyị nwere nhọrọ abụọ. Anyị na-agbakwunye na faịlụ ahụ / wdg / sudoers usoro ndị a:
Ma obu anyi tinye n'ime anyi .bashrc:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Otu esi edozi njehie dpkg: ịdọ aka na ntị: `` ldconfig '' na Debian Testing
Echere m na Debian bụ onye ọbịa na amaokwu ma ghara ida HAHAHAHAHA
Kpọmkwem, anyị na-ekwu maka ule Debian, ebe ihe ọ bụla nwere ike ịda (ọ bụ ezie na ọ dị obere) ... Ọ bụrụ na ịchọghị njehie, jiri Stable.
Chei ... mara oke mma
Afanyekwa bụ maka ibi n'udo, Ule bụ maka nnwale na SID bụ maka ndị dimkpa
hahahaha na-atụ aro otu amaokwu ahụ ozugbo m gụrụ gburugburu "Slackware naanị distro nke fọdụrụ maka ụmụ nwoke" hahahahaha
Damn, gwa m ihe ha chọrọ .. M na-eji Debian, Fedora, Arch, openSUSE, Centos (n'usoro ahụ) tupu Slackware ma ọ bụ Gentoo ..
Hahaha ezigbo ezigbo ịkwụkwụ ụgwọ debian akwụghị ọtọ.
ghara ịkọ ya Elav, taa anaghị m esi na LMDE pụọ.
Hehehe. Ana m alaghachikwute nne distro. LMDE dị mma, mana enwere m mkpa ịwụnye ihe niile site na ncha, na naanị ihe m chọrọ. Agbanyeghị, ana m eji nkwụghachi LMDE maka ụfọdụ ihe.
Batman na m bi na mix nke ule na ejighị n'aka. Maka ugbu a na enweghị nsogbu ọ bụla anọwo m ọnwa isii na-enweghị ịtinye batrị.
Na mkpokọta, Sid dị ike karịa Ubuntu na Arch, kedu nke ọzọ, echere m na Unstable is more stable than these two ... 😛
Ekwela overdo ya… st na-akwụsi ike karịa Arch? Ọfọn, enwebeghị m nsogbu kwụsiri ike na Arch, naanị obere ahụhụ na Nepomuk nke edoziri na KDE 4.7.2, na ejighị n'aka na-akpachaghị anya ma ọ bụ na-egbu maramara.
Erughị ala bụ otu ihe ahụ Arch.Ezie, Arch ka njọ, makana ihe na-apụta emechaala emezi, na Unstable ọ bụghị etu ahụ.
Arch bụ otu n'ime ihe kwụsiri ike, ha anaghị emelite dị ka ezighi ezi, ọ bụrụ na ihe bụ beta, ha etinyeghị ya.
Otu Arch anaghị etinye mma n’olu onye ọ bụla iji megharịa Ule
Enwebeghị m nsogbu nkwụsi ike na Arch
Ma ọ bụ m
Gịnị ka ha na-akpọ Beta? N'ihi na taa KDE "kwụsiri ike" ma taa ọ dị na nchekwa Arch.Ya mere na nchịkọta ndị ọzọ niile .. Biko biko kọwaa na ọ bụ maka gị na ha tụlere ihe beta.
Enwere ule nnwale maka Arch, ebe a na-abanye nchịkọta n'oge ahụ. Mgbe awa ole na ole nke ule, mgbe ụfọdụ ụbọchị (ee, ụbọchị ... ma eleghị anya, ị ga-echefu na KDE 4.7 were ihe dị ka otu izu iji banye ebe nchekwa ahụ) a na-etinye ngwugwu ahụ maka nkwụsi ike.
Anwala igwa m okwu. Na-egbusi oge gị.
HAHAHAHAHA Achọghị m HAHAHAHA, ọ dịghị onye ga-akwụ m ụgwọ ma ọ bụ obere ka ị jiri Arch ma ọ bụ ihe yiri ya LOL !!!!!
Anyị nwere ike ikwurịta ya ruo mgbe ebighị ebi, amaara m ụzọ m ga-esi kwụsị nke a mana ị nabataghị mgbe m tụrụ aro ya ... ọ dị mfe (ma ugbu a ana m echetara gị), ị ga-eji Debian Unstable na m ga-aga n'ihu na-eji Arch m, anyị ga-ahụkwa nke OS nwere enweghi nsogbu karịa otu ọzọ 😉
Kedu ihe i kwuru? … Ị na-anabata nzọ? 😉
Anaghị m eji Debian Unstable maka eziokwu dị mfe na anaghị m ezube iji ndụ m na-emelite site na ịntanetị. Obi dị m ụtọ na nchekwa mpaghara mpaghara m. M ga-ahụ ụbọchị na ọ gaghị ekwe omume ịnyagharịa otu ị ga - esi melite Ñej Ñej Ñej… Na anaghị m eme ya iji mata nke ga-akwụsie ike. Amaara m nke ahụ: Debian.
O doro anya n'ezie ... ọ bụ dị ka ha na-ekwu, ọ dịghị onye kpuru ìsì ka njọ karịa onye na-achọghị ịhụ, nri? LOL.
Agbanyeghị, ihe dị mkpa bụ inwe obi ụtọ na distro nke onye ọ bụla na-eji, ọ bụ ezie na ike agwụla gị ịkatọ Arch (dabere na njirisi nkeonwe gị), ahụrụ m ya n'anya…… mee ya. LOL !!!
Capricho bụ ihe e ji mara gị. Maara na naanị ihe kpatara iji Arch bụ n'ihi na dịka ị si kwuo, KDE na-arụ ọrụ ebe ahụ karịa ihe ọ bụla ọzọ ị gbalịrị. Adịghị m kpuru ìsì, agbalịrịla m nkesa karịa gị ma ị maara ya, dịka ị makwaara na ị ga-etinye Ubuntu na PC, n'ihi na Arch ị hụrụ n'anya ekweghị ka ị jiri Kiwix gaa n'ihu ma ọ bụ azụ. Ogologo oge ole ka ị na-anwale? Ọ dị ka ụbọchị 3 ọ dị mma?
Oge bu ego nwannem. Ma eleghị anya, ebe ị na-arụ ọrụ ị nwere ike igbu oge gị na-agbalị ime ka ihe na-arụ ọrụ, ma ọ bụghị n'ebe niile, ma ọ bụrụ na ị ghọtara ihe m na-ekwu. Ọ bụ ya mere m ji eji Debian, n'ihi na amaara m otu esi etinye ihe ọ bụla na-arụ ọrụ na-enweghị nnukwu ọrụ, ngwa ngwa ma nwee ntụkwasị obi kwụsiri ike.
Nope, ọ bụghị ọchịchọ, ọ bụ na Arch + KDE na-enye m ohere ịnwe ụdị ọhụụ nke ihe niile, na nkwụsi ike dị mma (ọbụlagodi na ị gọnarị ya ...), na ọ bụ KISS ... yabụ m nwere ike iwunye ihe niile site na ọkọ
Eeh, ị nwara karịa nke m nwere, mana ị bụ onye ọrụ Gnome ma ọ bụghị onye ọrụ KDE, ka anyị kwuo na anyị nwere ọdịmma dị iche.
Na ihe Kiwix, onye ọlụlụ dị mfe ... nke ahụ bụ ịwụnye ya na sava, kedu mgbe m kwuru na Arch bụ distro dị mfe? Ee, o were m ogologo oge iji mee ka Kiwix rụọ ọrụ na Arch, n'ikpeazụ emeghị m ihe ịga nke ọma ... agbanyeghị, Ekwenyesiri m ike na ụdị ọhụrụ nke Kiwix ga-arụ ọrụ nke ọma maka m, m ga-eme ule ahụ na laptọọpụ n'ime ụbọchị ole na ole, naanị ka ị hụ 😉
Gụọ abụ m: Oge bụ Ego. Argba egwu na onye nzuzu: Cool. Mana echeghị m na onye ọ bụla nwere mkpịsị aka 2 nke ọkpọiso na-echebara ya echiche maka ihe "ka njọ." You nwere ike were ụlọ ọrụ nwere ida 2 ruo 3 awa naanị maka ịhazigharị ihe dị mfe dịka Virtualbox? Kiwix nwere ike ịrụ ọrụ ugbu a, mana mgbe achọrọ ya, ọ naghị arụ ọrụ. Nke ahụ bụ ihe m na-ekwu. Onye nwere nnukwu azụmaahịa enweghị ike ịnọ na-eche onye na Arch Community ikpebi na ihe na-arụ ọrụ.
KISS kwesịrị m (ma gwa m uru ọ na-enye gị), yana na ngwugwu m na Ule m dị ugbu a, ọ bụkwa ebe ahụ ka m na-ajụ gị otu ajụjụ ahụ. Gịnị mere Arch jiri, mgbe m nwere nkwụsi ike niile, nchekwa na mmelite m chọrọ?
Ka anyị lee ... Adịghị m onye nzuzu. Na ihe nkesa na m ga-doro anya wụnye Debian Stable, Adịghị m igbu onwe iji wụnye Arch na ụlọ ọrụ sava ma.
Achọrọ m Arch na Ule, n'ihi n'eziokwu na na Arch m ga-enwe nchịkọta tupu oge ahụ, na Arch m na-ahazi ihe na ọkwa "ala" (dịka ọmụmaatụ, modulu ndị a ga-ebulite, ọrụ, wdg, ma ọ bụ na ị ga-agọnahụ m na Debian ha bịara arụ ọrụ na shit na ndabara karịa na Arch?).
Have nwere nkwụsi ike, nchekwa na mmelite ịchọrọ, Debian anaghị enye m kpom kwem ihe m chọrọ, Arch ee, na mfe. Iji maa atụ, mgbe ụdị KDE pụtara ọhụrụ (akpọtụrụ m KDE n'ihi na ọ bụ isi ihe kpatara m ji nwee obi iru ala) na Ule ọ batara n'oge, ọ ga - ewe ogologo oge, aga m eji Unstable ma ọ bụ njọ ... ma kwuo ihe chọrọ onye òtù ọlụlụ, mana ezigbo ahụmahụ m na Ule ogologo oge gara aga adịchaghị afọ ojuju, ejighị n'aka na achọghị m ịnwale ya ¬¬
N'ezie, ka m na-aga n'ihu na mgbanwe a na-enweghị isi, ka m na-amatakwu ole esemokwu ị nwere iji chebe gị ezigbo distro.
Achọrọ m Arch kama ịnwale, n'ihi n'eziokwu na na Arch m ga-enwe nchịkọta tupu oge ahụ, na Arch m na-ahazi ihe na ọkwa "ala" (dịka ọmụmaatụ, modulu a ga-ebulite, ọrụ, wdg, ma ọ bụ na ị ga-agọnahụ m na Debian ha bịara arụ ọrụ na shit na ndabara karịa na Arch?).
Maka ozi gị, Debian nwere nhọrọ ntinye nke yiri Arch, ebe m nwere ike itinye ihe m chọrọ, mana bịa, maka masochists, anyị nwere gị.
Have nwere nkwụsi ike, nchekwa na mmelite ịchọrọ, Debian anaghị enye m ihe m chọrọ, Arch na-eme, nke ahụ dị mfe. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ụdị KDE ọhụrụ gosipụtara (M kpọtụrụ aha KDE n'ihi na ọ bụ isi ihe mere m ji nwee obi iru ala) na Ule ọ na-abanye n'azụ oge, ọ na-ewe ogologo oge, m ga-eji Unstable ma ọ bụ njọ ...
Ekwuola m gị. Anyị ga-ahụ ụbọchị mgbe mmelite dị ukwuu ga-ewetu sistemụ ahụ. Know mara na m nwere a na-egbu egbu ọchị na-echere oge maka ...
ma kwuo ihe ị chọrọ onye ọlụlụ, mana ezigbo ahụmịhe m na ule na ogologo oge gara aga adịchaghị afọ ojuju, Unkwụsi ike achọghị m ịnwale ya able
Anyi alaghachi na otu ihe ahu nke m gwara gi na okwu ozo. Anaghịzi m ekwenye na arụmụka nke onye ruo mgbe ọnwa ole na ole gara aga gbachitere ezé Ubuntu na ntu, ma na-awakpo ya ugbu a iji chebe nkesa ọzọ. Gwa ndị na-agụ akwụkwọ ogologo oge gara aga ọ bụ na ị nwalere ule .. Maka na dịka m maara, ọ dị m ka ule gị na Debian Sarge, ma ọ bụ Debian Etch .. Ego ole ka mmiri zoro kemgbe ahụ? Etch, Lenny, Squeeze na ugbu a Wheezy.
N'ikwu eziokwu, nke a bụ ebe mkparịta ụka m bịara. Mgbe ị nwere arụmụka siri ike, ịmara ebe m ga-achọta m 😀
Agbachitere m ma chebe ihe Ubuntu bụ afọ ole na ole gara aga, ugbu a anaghị m enye penny maka ya. Ọ kwesịrị na m ga-agbachitere akara ma ọ bụ aha ahụ karịa ngwaahịa a? Enwere m mmasị na Ubuntu 8.04, 8.10, ọbụna 9.04, ha dị oke mma, mana mgbe ahụ ha malitere iwetara m nsogbu nkwụsi ike, ọ bụ ya mere dị ka ị na-ekwu: "Akpọrọ m" ya, naanị n'ihi na anaghị m enwe mmasị na ihe ọ ghọrọ, ma ekwere m na m Nile m ikike ikwere ma ọ bụ ekwenyeghị na ihe.
O doro anya na ana m eme ka ọ pụta ìhè na m na-ekwu site na Ahụmahụ m, ọ ga-adịkwa otu a n'ihi na enweghị m ike ikwuchitere ndị ọzọ. Ubuntu 10.10 gburu m, ebe ndị ọrụ ndị ọzọ mere nke ọma ... dị ukwuu maka ha, ana m ekwu maka onwe m.
Ihe doro anya na ị masịghị bụ na m kwuru na-agbachitere Ubuntu na Unity ziri ezi? HAHAHA !!!!
Ma ee nwoke m maara, ọ na-eme ka ọnụ gị mmiri chee na na «pacman -Syu» usoro na-eme ka m daa, nke ọma ... onye ọ bụla chọrọ ihe, ọ bụ ezie na ọtụtụ oge anaghị emezu HAHA.
Agbanyeghị ka anyị hụ ... obi ikeUgboro ole ka sistemụ ahụ mebiri mgbe emesịrị ya na Arch?
Onweghị. Mgbe sistemụ m mebiri, ọ bụ maka imetụ ihe m na-ekwesịghị ịnwe.
Elav, ihe ọ bụla ị na-eyi na mmelite abụghị n'echeghị echiche, ọ gwụla ma ị megharịrị Ule, nke a na-enyeghị iwu, n'eziokwu anaghị m arụ ọrụ ya ma ọ bụghị n'ihi nke ahụ ka ndị Arch zipụrụ abụba na onye jọgburu onwe ya n'ike iji taa m ahụhụ. .
Anaghị m eme ya iji mata nke ga-akwụsie ike. Amaara m nke ahụ: Debian.
Debian na Stable, kwụsị ikwu okwu ma mee ule na-atụle Arch na Debian Sid, ọ bụrụ n'ịchọrọ, enwere m ike ịfefe ya Ka Anyị Jiri Linux si ebe a.
Ọ naghịdị abịara m ịtọlite ​​ihe nkesa na Arch, nke mbụ n'ihi na na sava m na-ahọrọ ka a nwalee m n'ụzọ miri emi na nke abụọ n'ihi na ihe nkesa afọ ngwugwu na-akụ m.
naanị ihe mere eji eji Arch, bụ n'ihi na dịka ị si kwuo, KDE na-arụ ọrụ ebe ahụ karịa ihe ọ bụla ọzọ ị gbalịrị
Na Gentoo ọ na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na ọ bụ KISS karịa Arch, site n'ọchịchị nke atọ KZKG ^ Gaara ga-eji Gentoo
Ogologo oge ole ka ị na-anwale? Ọ dị ka ụbọchị 3 ọ dị mma?
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịwụnye Arch n'ihi na n'ime elekere abụọ kachasị ị nwere Arch + Kdebase na-agba ọsọ, gwa m Gentoo bụ ihe ọzọ, ebe ahụ ịchọrọ ọtụtụ ụbọchị nwụnye.
Oge bu Ego. Arch na-egwu ma na-nzuzu
Na-etufu oge gị ma ọ bụrụ na ị wụnye Kde zuru ezu ma ọ bụ Gnome zuru ezu, nke yiri ka ọ bụ m zuru oke n'anya m ebe ọ bụ na ị na-ebu KISS site na ịwụnye otu puku ihe ị na-achọghị.
M na-agwa gị na ị gaghị efu ihe karịrị awa abụọ
Na ngwugwu m na Ule, amam ihe dị ọhụrụ ma ọ bụ ebe ahụ ka m na-ajụ gị otu ajụjụ ahụ. Gịnị mere Arch jiri, mgbe enwere m nkwụsi ike, nchekwa na mmelite m chọrọ?
Ule Debian abughi ihe nloghachi di ọcha, anwaleghi m ya iji hu ya mana obu ihe m ghotara
Maka ozi gị, Debian nwere nhọrọ ntinye yiri Arch, ebe m nwere ike itinye ihe m chọrọ
Nke a bụ ụgha dị ka katidral, ihe nkwụnye ihe nke Debian Stable bụ ihe ọzọ karịa onye na-esote, nke na-esote, onye nrụnye ọzọ. Enweela m ike ịlele ya na Debian Lenny.
Enweghị m mmasị Debian n'ihi nnagide nke ngwugwu na obere ihe edere, ọ bụ ya mere m ji wepu ya
Ekwuola m gị. Anyị ga-ahụ ụbọchị mgbe mmelite dị ukwuu ga-ewetu sistemụ ahụ
Chekwaa: Ubọchi nke mere m, ị ga-abụ onye izizi mara
mgbe ahụ ha malitere iwetara m nsogbu nkwụsi ike, ọ bụ ya mere na ị na-ekwu: "Ana m akparị" ya, naanị n'ihi na enweghị m mmasị na ihe ọ ghọrọ, ekwenyekwara m na ikike m niile ikwenye ma ọ bụ na ọ bụghị na ihe.
Otu ihe a ka m ji buso Ubuntu agha, ma m tinye nke ubunto.
Ma ugbu a, nye ha abụọ:
Na-enwe otu ihe ahụ, ihe niile edere bụ Arch Vs X distro or Debian Vs X distro.
Dị ka ndị nchịkwa na ị bụ, ị kwesịrị ịkwụsị nke a ma mepee Debian Vs Arch ma kwuo banyere ya n'ihi na ọtụtụ oge ị naghị ekwu maka ya na ebe kachasị mma
Nke a bụ naanị ihe m ga-ekwu maka ihe a niile .. Debian Lenny bụ ụdị ochie, nri? Ọ mere gị otu ihe ahụ KZKGGaara nwara ihe dị ka otu puku afọ gara aga ma ka na-eche na nke ahụ ka bụ otu ihe ahụ kemgbe ahụ? Ọ dị mma, a na m akpọku gị ka ị budata Debian iso wee chọọ nhọrọ ahụ: Ọkachamara Wụnye.. Ka anyị lee ihe ị chere maka nnukwu ụgha m.
N'ihi na Virtualbox nọ na-egwu aghụghọ ọtụtụ ma ọ bụrụ na m gbalịrị ya.
Agbanyeghị, Rolling na-efu.
Ihe m nwara na Lenny bụ ntinye ọnọdụ ederede, ọ dị ka ihe kachasị mfe n'ụwa. N’oge ahụ amaghi m Arch
Ọ bụrụ na m ga-ewe iwe site na ngwugwu ọ bụla nke na-anaghị arụ ọrụ n'oge ụfọdụ .. uff. Debian nwere usoro mmelite dị ọsọ ọsọ, mana ole na ole gara aga gara aga .. site na chi !!! Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu, ị ga-echere ọnwa tupu ịchọta ihe ngwọta.
Too bad elav, ị na-ekwu maka Archlinux dị ka a ga - asị na ọ bụ ọgbaghara, dịka ọmụmaatụ na desktọọpụ kachasị amasị anyị, nke mbụ ha na - anwale ya na repo [gnome-unstable] mgbe ụbọchị ule gachara gụnyere (akụkọ ahụhụ, mmezi, wdg) maka repo [ule] ebe ọ na-aga site na usoro nyocha ndị ọzọ, iji ruo [mgbakwunye] repo
Yabụ na ngwugwu niile, desktọọpụ nwere ngalaba ha na-ejighị n'aka, mana ndị a na-anwaleghị, na naanị mgbe ọ na-arụ ọrụ dịka o kwesiri, nchịkọta ndị ahụ na-aga ma isi ma ọ bụ mgbakwunye mgbakwunye dabere na ngwugwu ahụ.
Na [multilib] na [comunity] repos nwere ha iche iche ebe nchekwa. Site na nkọwa gị, ị gosipụtara na ị maghị ọtụtụ ihe banyere archlinux ma ọ bụ na ị na-ewesa ya iwe, n'agbanyeghị ihe kpatara ya, ọ naghị ekwu okwu ọma banyere gị elav.
Jo na taa dị ka Ndị Kraịst na-ekwu, oge Chineke zuru oke. Mgbe m kwusịrị okwu, emere m pacman -Syu na oh mmelite nke ihe nkesa xorg pụta, agbalịrị m ya n'ule izu ole na ole gara aga, ọ gbaghaara ebe eserese, nsogbu na ahụhụ nke xorg ọhụrụ yana yana ndị ọkwọ ụgbọ ala nke nvidia, mbubreyo na-apụta ihe ngwọta, ma lee ya.
Na njiko, a na-eji sọftụwia emelitere nke ọma, ma ọ bụrụ na ị na -eche ule ma ọ bụ na-ejighị n'aka, ị ga-amararịrị na ọ bụ maka ịnwale na ị nwere ụfọdụ chinchi ma ihe ruru isi, mmezi, ọbụna obodo esịmde ọma na-emegide ndị kasị ama distros, na-adịbeghị anya, mụ software na archlinux onwe ha.
Dị ka mgbagha niile .. Ihe na-agahie ma ha mezie ya 😀
Enweghị m ihe ọ bụla megide Arch, naanị m na-atụgharị ya nke ukwuu site na ọnọdụ nke nwa okorobịa (KZKG ^ Gaara) onye ihe ha chere na ọ na-eji bụ nke kachasị mma. Anwalebeghị m Archlinux nke ọma, mana bịakwasị mmadụ, na ụfọdụ ahụhụ ga-enwerịrị n'ihi na onweghị ihe zuru oke. Ma eleghị anya, ịnweghị ya na ngwaike gị, mana onye ọzọ. Otu ihe ahụ na-aga distros niile.
Agwaara m gị mgbe niile na m na-ekwu site n'echiche m, site na ahụmahụ m. Arch rute ugbu a na aru oru m ebube, agwara m gi ta ugbua awa ole na ole gara aga, "obere oge gara aga obi adighi m mma ma nwe obi uto na laptọọpụ m", ima atu, ugbua ị wunye openSuse ma ọ rụọ ọrụ ebube, awụnyere ya na ihe niile na-ezighị ezi n'ihi ngwaike m (dịka ọmụmaatụ), m ga-asị na enweghị m mmasị na ya ma ị ga-asị ee. Anyị abụọ ziri ezi ...
Ah mana i ka di? Gaa nri ehihie
Ana m eji SID mgbe niile ma enweghị m nsogbu XDD ma e wezụga mgbe m na-ahazi ...
Ugbu a, adịla m afọ 1 ma ọ bụ 2 ugbua xd
Elav na KZKG ^ Gaara emeghi sulk… 🙂
Hahaha ị kariri imeghari n'ihi na nke ahụ bụ nkịtị Hahahahaha
Hahaha, ọ bụrụ na m bụ gị, emegharịrị m n'ihi na nke ahụ bụ ezigbo hahaha .. Na, mana ha na mkparịta ụka siri ike .. Thebọchị m jiri nke a mee ihe, egbubiri m netwọk ahụ 😀
Ihuhie njehie a: - etinyere dpkg, ị ga - eji aka gị mee 'dpkg –configure -a' iji dozie nsogbu ahụ, kedu ihe m ga-eme?
Ọfọn, ị mepee ọnụ na dịka mgbọrọgwụ ị na-eme:
Ma ọ bụ na ị na-emezu iwu a na-ekwu site na sudo….
mgbọrọgwụ @ debian: / # apt-get -t nnwale wụnye libreoffice
Anya Miguel dijo
Hey lee, ị ga - enyere m aka mana ọ dị na Canaima
You nwere ike ịgwa m otu esi dezie panti, menus na ihe niile dị na Canaima, biko zaa ozi m
Zaghachi Miguel linares
mana achọrọ m ịwụnye ihe nchọgharị weebụ chromium mana enwere m njehie na-anwale na mgbọrọgwụ ma m gwara onwe m nke a ka m tinye ya na mgbọrọgwụ ọdụ apt-get install -f I detuo ya mana na njedebe mgbe a na-etinye ya, ọ na - apụta mgbe niile :
E: Sub-process / usr / bin / dpkg weghachite koodu njehie (1)
kedu ka m ga - esi dozie ya biko gwa m
Na ọnụ ya: Kalinda na Cal.